Ikaraveni Yeselula e-Karamürsel - RayHaber
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmara41 KocaeliAmahara wehhovisi leselula eKaramürsel
mobile caravan office in karamurselde
IKocaeli Metropolitan Municipality Department of Transportation and Traffic Management, i-Office Office Caravan yaqala ukubhekana nezidingo ezandayo ezikhungweni zamakhadi okuhamba, yathunyelwa ogwini lweKaramürsel. Abakwa-mobile Office Caravan bazosebenzela izakhamizi kuze kube uLwesihlanu eKaramürsel.
I-1 E-KARAMÜRSEL YAMASONTO
ICara Office Yamaselula yathuthukisa ukuxhasa izinsizakalo ezihlinzekwa nguMnyango Wezokuhamba kanye Nezokuphathwa Kwezitimela kuMasipala waseKocaeli Metropolitan zenzeka ogwini lweKaramürsel. ICara Office Caravan, eyenzelwe ngenhloso yokusetshenziselwa isiza ngaphandle kwamahhovisi asele ekhona, ihlinzeka izakhamizi zaseKarmamrrsel lula.
ICara Office Yamaselula yaqalwa nguMasipala waseKocaeli Metropolitan kulo nyaka futhi ihlinzeka izakhamizi ngokushesha. Kulesi simo, i-Mobile Office Caravan, ehlinzeka ngezinsizakalo zamaKhadi okuhamba nezindawo zeSME, isebenza ogwini lweKaramürsel. Ngalesi sikhathi, kuzokhishwa amakhadi wokuhamba ancishisiwe nawamahhala bese kwenziwa izinqubo zokuthola ama-visa esitokisini se-Mobile Office.
INKONZO YENZA IZIMALI
IKocaeli Ine-Mobile Office Caravan, uMasipala waseKocaeli Metropolitan uthatha izakhamizi zezakhamizi zokuhamba. Ukunikeza ukusatshalaliswa kwezinsizakalo zamakhadi okuhamba, i-caravan iphinda inciphise nobuningi bamakhadi abafundi abathola ezikoleni lapho imfundo iqala.
I-SME ne-Mobile Office Iklabhu eKandira 02 / 07 / 2019 Uhlelo lwe-Kocaeli Smart Bike System "KOBİS" project, okuyinto uMasipala Kocaeli Metropolitan wethula ngo 2014, isakazeka ngokushesha kulo lonke esifundazweni. 3. Ngesiteji, i-2019 ifinyelele esifundeni se-71, esineziteshi ze-864, ama-500 smart parking kanye nama-12 amabhayisikili ahlakaniphile kulo lonke elaseKocaeli. Kulesi simo, ama-SME kanye ne-Mobile Office Caravan baqala ukukhonza ngesonto elilodwa eKandira, enye yezindawo ezihlala njalo izakhamizi ezinyangeni zasehlobo. IZINYE ZAMASEBENZI EZISEBENZISWA KANDIRA 3. Isiteshi se-2 sasungulwa esifundeni saseKandira. Iziteshi ze-2 SME zihlanganisa iKakıra centre kanye neKiteshi yebhasi yebhasi yasungulwa futhi yahanjiswa. Njalo ...
I-SME ne-Mobile Office Iklabhu eCebeci Beach 12 / 07 / 2019 I-Kocaeli Smart Bikingcle System “KOBİS geçen, eyaqala ukusebenza e-2014, yasungulwa esifundeni i12. Enye yamaphuzu abaluleke kakhulu kwezokuvakasha ehlobo eKocaeli, Kandira, i-Mobile Office Caravan idluliselwe ogwini lweCebeci ukuze isizakale ohlelweni lwe-OB SME ”. UKUJABULA I-BICYCLE esiteshini i-CEBECİ COAST KOBİS kwasungulwa iBlue Flaged Cebeci Beach yaseKandıra okungenye yezikhungo zamaholide ezidume kakhulu eKocaeli ikakhulukazi ezinyangeni zasehlobo. Izakhamizi eCebeci ziyahlomula ngamabhayisekili ahlakaniphile anezela ubuhle obuhlukile kumaholide abo. Isiteshi se-SME sizobe sisebenza ngesikhathi sasehlobo. LULA KAKWAKHIWA OKWENZA IHOLIDAYI eKandıra, okungenye yamaphuzu abaluleke kakhulu kwezokuvakasha ehlobo eKocaeli, izakhamizi ziyahlomula ohlelweni lwe-OB SME ”…
Ukuthengwa Kwekhadi Lekhadi Lenziwe Kulula Ngesevisi Yesevisi Yefoni 08 / 02 / 2019 UMasipala waseKocaeli uMnyango Wezithuthi Zomphakathi uyaqhubeka nokwandisa ububanzi bezinsizakalo ezinikezwa izakhamizi. Okokugcina, iphrojekthi ye-Ofis Mobile Office Büyük isetshenziswe nguMasipala waseMetropolitan. Ngaphakathi kweprojekthi, lezi zidingo zizohlangana kwi-site futhi zizohlinzekwa ngesimo se-Mobile Office trailer. ISIKHATHI SESIKHATHI SESIFUNDO SOKUQALA ISIKHATHI SOKUPHILA Umzila ozohlinzeka ngokuhamba ngokushesha ezindaweni lapho izidingo ezigxilwe khona kuzophinde ziphuthumise izinsizakalo futhi zandise ukwaneliseka kwezakhamizi. Ikakhulukazi lapho izikole ziqala ukufundisa ukukhathazeka kwekhadi lomfundi kuzoncishiswa. UKUSEBENZISWA KWENKONZO YEZIKHADI ZAMASEBENZI ...
Insizakalo yeHhovisi leSelula yenziwa eKocaeli Metropolitan 07 / 03 / 2019 Umasipala waseKocaeli uMnyango Wezokuthutha Zomphakathi uqale isevisi entsha ukuhlangabezana nezidingo ezikhulayo emakhadi okuhamba. Iphrojekthi ye-Mobile Office ithuthukiswe ukusekela izinsizakalo ezinikezwe ekhelini lekhadi seliqalile. Ngaphandle kwamahhovisi asebenzayo ahleliwe, le phrojekthi yasungulwa ngenhloso yokuhlinzeka ngezinsizakalo zendawo. Izifundo zokuqala zenziwa esifundeni saseKaramürsel. Izidingo zamandla we-caravane ehlanganisiwe zinikezwe iphaneli yelanga egibele kuwo. Ngaphezu kwalokho, i-caravan isiholele ukukhanyisa, idesksi yesevisi ye-2, iqembu elihlezi, uxhumano lwe-intanethi kanye nesimo sezulu. Iya emakhanini ...
I-Dalcık intersection izophumula Karamürsel 27 / 11 / 2018 UMasipala waseKocaeli Metropolitan uyaqhubeka nemizamo yawo yokuhamba kahle emigwaqweni yokuhamba lapho ukuhamba kwezimoto kugcwele khona. Imigwaqo edlula ezikhungweni zezifunda futhi igxilwe ngezikhathi ezithile ngenxa yamalambu omgwaqo, yenziwa isizakala ngomsebenzi owenziwe. UMasipala Metropolitan wakha izinhlaka ezintsha zokuqeda lobu bunzima. Umasipala waseMetropolitan weKaramürsel city mraba tunaching jaching project, ngenkathi wenza ithrafikhi enkabeni yesifunda izonikeza ithuba lokungena nokuphuma. I-290 METER TUNNEL eKaramürsel Town Square, iphrojekthi engaphansi komhubhe iyaqhubeka. Izicelo zokugcotshwa kwenqwaba ziyaqhubeka kuphrojekthi esakhiwa. Ukuphuza kuphrojekthi…
I-SME ne-Mobile Office Iklabhu eCebeci Beach
Ukuthengwa Kwekhadi Lekhadi Lenziwe Kulula Ngesevisi Yesevisi Yefoni
Insizakalo yeHhovisi leSelula yenziwa eKocaeli Metropolitan
I-Dalcık intersection izophumula Karamürsel
UTIKAD, kuqala Green Office eTurkey (Green Office) wayefaneleka izinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni. (EZIKHETHEKILE IZINDABA)